About Us - Qingdao Aedis Fabric Naasaha Co., Ltd
naqshado Aedis Fabric koolada iyo iibiya nidaamyada hawo dhar (more guud ahaan loo yaqaan Fabric marinnada / sigisyada koollo / Sox) qeybiyo hawada qabyo-free in nooc kasta oo qol iyo codsiyada.
Aedis Fabric Naasaha ahaa mid ka mid ah soo saarayaasha koollo dhar marka hore la aasaasay sanadkii 2003 oo tan iyo markaas uu ku koray galay saaraha ugu weyn koollo dhar ee Shiinaha.
Aedis Fabric Naasaha waxa uu ku yaalaa Qingdao, Shiinaha iyo ku qalabeysan yahay software xisaab sare awood injineerada ay khibrad leh si ay u kiciyaan xalka iyo in ay bixiyaan taageero ugu wanaagsan ee farsamada warshadaha koollo dhar ah. Xafiiska Tani waxaa la aasaasay sanadkii 2003 oo tan iyo markaas ayaa si guul leh loo balaadhinta caymiska Shiinaha oo dhan, iyo tan iyo 2012, waxaan bilaabaan in ay dhoofiyaan our koollo hawada dhar dunida oo dhan iyada oo qaar ka mid ah Wakiilada HVAC-saareyaasha '.
Waxaan u isticmaali software 3D lahaansho inay qaabeeyaan habka kala firidhsan hawada. Marka laga kakanaanta design habka tayada our loo hubiyo in bixinta on target iyo waqtiga. Dabacsanaan Technical nidaamka weheliso dhinacyada deegaanka iyo faa'iidooyinka dhaqaale oo kaliya qaar ka mid ah sababaha nidaamka kala firidhsan hawada ayaa helay taageero la injineero, horumarinta iyo qandaraaslayaasha dunida oo dhan, kuwaas oo inta badan loogu badalo ducting biraha caadiga galay nidaamka dhar. Wax kasta oo la samayn karaa in biraha la samayn karaa in dhar.
Firidhsan hawada Fabric waa qeybta a korayo si dhakhso ah. Nooca fudud ee nidaamka FabricAir ayaa ka dhigaysa in ay haboon tiro ka mid ah codsiyada ku jiraan. dhismayaasha ku meel gaar ah, sida teendhooyin iyo hoolalka bandhig, iyo qalabyada dhismayaasha jira. The tayada anti-xoqe dhigo mid weyn oo caan ah in meelaha isboortiga, natatoriums, jikooyinka warshadaha oo aan qaboojinta iyo baraf codsiyada ugu yaraan, halkaas oo ducting biraha caadiga ah ayaa qaladaad la taaban karo. The guryaha nadaafad iyo ikhtiyaarka anti-microbial ka dhigaysa in ay ka xoogbadan, ee processing cuntada, kaydinta cuntada iyo codsiyada caafimaad. Iyo raaxada abuuray by ah tusaalayaasha socodka bespoke dhigi cimilada gudaha ka xoogbadan, nidaamka biraha caadiga.
Isticmaalka ducting dhar dhigan tahay abuurista nidaam kala firidhsan hawada la xagal kasta, wax kasta oo dheer iyo wixii dhexroor doonayo. Waxaa jira xadeynta ma marka ay timaado suxullada, yareeya, oo waxay qaadan-offs. Wax kasta oo aad samayn lahayd in ducting biraha waxaa la samayn karaa in dhar, ka dibna qaar ka mid ah. Sida ducting dhar ma tahay xoqe, waxaa jira tiro ka mid ah codsiyada halkaas oo nidaamka kala firidhsan hawada dhar waa ay ka sareeyaan ducting biraha caadiga. Marinnada Fabric ka yar buuq badan, uumiga xor ah oo miisaankiisu yahay oo kaliya tiro yar oo ducting biraha.
Midabada koollo lagu haboon kartaa in nidaamka design gudaha iyo waxa suurto gal ah in ay daabacdo logos oo badan oo ku saabsan dusha ka. Marinnada xataa waxaa loo dhiibi karaa daahan tusaale celisa gaar ah saliid, daaweynta anti-microbial, daaweynta anti-Kenia iyo wixii la mid ah. Dheeraad ah oo ku saabsan design nidaamka isu bartaan.
Faa'iidada kale ee nidaamka dhar badan ducting biraha waa heerka sare ee raaxada degan goobaha hawo. Isticmaalka dhar u ogolaanaya injineerka si ay u abuuraan nooc socodka fiican ee meel walba la qabyo lahayn, uumiga lahayn, buuq lahayn oo aan lahayn aag dhintay. Waayo aragnimadu waxa ay sheegaysaa in isticmaalka hababka kala firidhsan FabricAir in jawi shaqo oo qabow ayaa lacagta ku daray of maalmoodna waan bukay yar ka mid ah shaqaalaha, iyo nooca anti-xoqe iyo nadaafad nidaamka ducting ka dhigaysa in ay ka xoogbadan, in xarumaha qabow iyo keydsho sida dhirta processing hilibka.
hababka kala firidhsan hawada Fabric waxaa sidoo kale loo yaqaan nidaamka dhar hawo, marinnada dhar, sharaabaad koollo, ama Sox, oo waa caan waxtarka dabacsanaan iyo muhiimka ah sida qabyo-free, uumiga-free, noiseless, daxalka-xor ah oo nadiif ah. hababka kala firidhsan FabricAir dabooli tiro balaadhan oo ah codsiyada ku jiraan. cuntada, isboortiga, warshadaha, tafaariiqda iyo goobaha dadweynaha, waxbarashada, xafiisyada iyo raaxada guud ahaan, iyo warshadaha caafimaad. badan oo ku saabsan codsiyada Baro.